ကိုထွန်းဝေ စာမျက်နှာ : မြေမြှုပ်မိုင်းတွေကို ရှင်းလင်းဖယ်ရှားပေးမယ်လို. ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောကြား
မြေမြှုပ်မိုင်းတွေကို ရှင်းလင်းဖယ်ရှားပေးမယ်လို. ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောကြား
ပြည်တွင်းစစ်လက်ကျန်မြေမြှုပ်မိုင်းတွေကို ရှင်းလင်းဖယ်ရှားပေးသွားပြီး မြေမြှုပ်မိုင်းကြောင်. ကိုယ်အင်္ဂါဆုံးရှုံးခဲ.ရတဲ.သူတွေကိုလည်းအကူအညီပေးသွားမယ်လို. ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောကြားလိုတ်ပါတယ်။